ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သူသည်သင်နှင့်ပရောပရည်သည်? ဤလက္ခဏာသက်သေဘို့အထဲကကြည့်ရှု!
သင်၌စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ကောင်လေးရှိသည်သော်လည်းသူ၏ခံစားချက်များကိုသေချာမသိကြပါနဲ့? အစဉ်အဆက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတယောက်သည်လမ်းတွင်အချို့သောအရာသို့မဟုတ်ပြုမူသောအမှုမတဲ့အခါဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအံ့သြတွေ့ရှိ? အစဉ်အဆက်သင်သူကိုတကယ်သင်တို့နှင့်အတူအပရောပရည်လျှင်သိရန်အဘို့အထွက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လာဤနိမိတ်လက္ခဏာရာကိုအံ့ဩခြင်း?
သင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ကောင်လေးအချိန်တစ်ခုကြာရှည်စွာမျက်လုံးချင်းကိုထိန်းသိမ်းထားလိုလျှင်, ထို့နောက်သူသည်ထိုအဖြစ်ကိုကောင်းစွာသင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်. သို့သော်, ရှက်တတ်ယောက်ျားတွေလည်းမျက်လုံးချင်းကိုင်ထားနိုင်, အချိန်အတိုအတွင်းဆိုသော်ငြားလည်း.
မချဉ်းကပ်နိုင်သောအဖြစ်ရှက်ကောင်လေးထုတ်ပယ်မထားပါနဲ့. သင့်ပတ်လည်၌နေသောအခါတိုင်းသူ blushes ဆိုရင်, ထို့နောက်တစ်ဦးစကားလက်ဆုံပယ်စတင်သူသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်အသေခံနိုင်အဖြစ်ကောင်လေးထွက်သွားကူညီသင့် cue ရှိပါတယ်. ပင်မရှက်မကြောက်နေသောယောက်ျားတွေများအတွက်, blushing ကျိန်းသေသင်၌သူ၏အကျိုးစီးပွား၏သိမ်မွေ့သောစကားရိပ်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးလက္ခဏာသက်သေဖြစ်.
အခါသင်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်လေးအမြဲဂနာမငြိမ်ပုံရသည်အဘယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက်တို့သည်လည်းအံ့ဩ? ကောင်းစွာ, သူထားခဲ့ဖို့လိုလို့အမြဲတမ်းမဖြစ်စေခြင်းငှါ. သူသည်သင်စကားပြောဖို့သတ္တိတက် Sum ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဖြစ်သူများသည်ပဲသူ့ရဲ့အာရုံကြောများလွှဲပြောင်းယူနေပါတယ်.
သင်၌စိတ်ဝင်စားအတွက်သင်နဲ့စကားပြောနေသည့်အခါသူ၏မျက်စိဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားအံ့သောငှါယောက်ျားတစ်ယောက်ပေမယ့်, သူကျယ်သောမျက်စိနဲ့သူ့ရဲ့မျက်ခုံးပင့်လျှင်, ထို့နောက်သူသည်သင်နှင့်အတူပရောပရည်သောလက္ခဏာသက်သေဖြစ်.
သူတစ်ဦး copycat ဖြစ်နေလို့ပါ?
ဤသည်မှာတစ်ဦးသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်ဖြစ်ပါသည်. သူသည်သင်နှင့်အတူပရောပရည် အကယ်., သူမသိစိတ်သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို copy ကူးပါလိမ့်မယ်. အကယ်. သင့်ရဲ့ဆံပင်အားဖြင့်သင်တို့၏လက်ကိုရွှေ့အခါတိုင်းသတိပြုမိကြပြီ, မိမိလက်ကိုလွန်းသည်သူ၏ဆံပင်အားလှုံ့ဆော်ပေး? သို့မဟုတ်သင့်ခြေထောက်ပြောင်းသွားချိန်တွင်ပင်, သူလည်းမ? ဒါဟာပရောပရည်လုပ်ခြင်း၏ပဉ္စလက်ဖြစ်နှင့်ဤသင်တို့အဘို့အထွက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လာနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတချို့ရှိနေပါတယ်.
သင်သည်အစဉ်အသင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုစကားပြောအဖြစ်ကောင်လေးသင်ဦးတည်သူ၏ဦးခေါင်းကို tilting ကြောင်းသတိပြုမိရှိသည်? ဒါဟာသူကယ့်သင်နှင့်ညောဖြစ်နေလို့ပါ likes ဆိုလိုတယ်, ဒါကြောင့်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုပြောနေဘာမှပေါ်ထွက်မလွတ်သွားစေရန်.
သင်၌စိတ်ဝင်စားသောကောင်လေးတစ်ယောက်သူသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်လိုသည်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြုသကဲ့သို့သင်တို့မှာပြုံးလိမ့်မယ်. ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးတစ်ဦးစကားစတင်ရန်ဖိတ်ခေါ်အဖြစ်ယူ.
သူ akimbo ခံရပ်နိုင်ပါသလား?
သင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူသည်တစ်ဦးကကောင်လေးသူတို့တင်ပါးပေါ်တွင်လက်ဝါးနှင့်အတူရပ်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ချကြသည်ကိုသင်ပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, သူ့ရဲ့ခါးပတ်၏ကွင်းထဲတွင်နေရာသို့မဟုတ်တောင်မှလက်မ. ထိုနိမိတ်ကိုသိသာထင်ရှားစွာမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တကလမ်းညွှန်အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်.
သင်တစ်စုံတစ်ဦးကြိုက်လျှင်သိခဲ့ပါ, သင့်ရဲ့ကျောင်းသားများကိုချဲ့သင်တို့သည်မကျင့်လျှင်, သူတို့စာချုပ်? စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်ပြုလိုသမျှကိုသင်ကစကားလက်ဆုံရှိသည်အဖြစ်သူ့မျက်စိမှာကြည့်ပါ. သူတို့အကျယ်ချဲ့မယ်ဆိုရင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်သူစိတ်ဝင်စားသည်ကိုသိ.
ကောင်လေးအစဉ်အဆက်သင်ပျော့ပျောင်းထိတွေ့ပေးတော်မူပြီ, သူကနေဖြတ်သန်းပင်အဖြစ်? ထို့နောက်သူကျိန်းသေသင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းဆီးဖို့လိုလား. သို့သော်, နေသောသူတို့အား၎င်းတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ထွက် watch, ကောင်းစွာ, ကိုယ့်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးအတွက်လှည့်ပတ်ကစားလိုသူများအတွက်တွားတတ်သော. ကျွန်တော်ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုသင်သိလား, သင် ... ဘူးလား?
သူသည်သင်နှင့်အတူပရောပရည်လျှင်သင်အခုချက်ချင်းသိရန်အဘို့အထွက်ကိုကြည့်ဖို့နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးကတည်းက, ကဦးချိုအားဖြင့်နွားထီးတကောင်ကိုယူဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်. အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုရှောက်သွားစေတော်မမူပါနှင့်!